ठेकदारहरूको टिठलाग्दो बिलाप: ६५ अर्ब सरकारले तिरेन, धरौटी मात्रै फिर्ता दिए पनि हुन्थ्यो - Aarthiknews
ठेकदारहरूको टिठलाग्दो बिलाप: ६५ अर्ब सरकारले तिरेन, धरौटी मात्रै फिर्ता दिए पनि हुन्थ्यो
काठमाडौं । कुनै पनि विकास निर्माण वा परियोजनाको काम किन तोकिएको समय मै पुरा भएन भन्ने प्रश्न जहाँ जसलाई सोधे पनि जवाफ उही आउने गर्छ- ठेकदार बदमास परेर। तर, ती ठेकदारहरूका कुरा भने कसैले सुन्ने गरेको छैन।
उनीहरू भन्छन्- सरकारले कामसकेपनि पैसा दिँदैन। काम गर्दा सहज वातावरण निर्माणमा कहिले पनि सहयोग गर्दैन। एकातिर सरकारले भुक्तानी नदिएर काम गर्न नसकेको गुनासो छ उता त्यही विकास खर्च पर्याप्त मात्रामा गर्न नसक्दा सरकारको असफलता उदांगिएको छ।
त्यसो त निर्माण व्यवसायीको अप्ठ्यारोबारे सोध्दा सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई कुनै पनि रकम तिर्न बाँकी नभएको भन्ने गरेको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले पनि सरकारले झुट बोल्दै निर्माण व्यवसायीलाई रकम तिर्न बाँकी नभएको भन्दै पन्छिने गरेको बताए ।
तर, तथ्य भने अर्कै छ। सिंहका अनुसार करिब दुई हजार ७ हजार ७२ वटा आयोजनाको रकम लामो समयदेखि सरकारले तिरेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट २० अर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीहरूले पाउन बाँकी रहेको सिंहले बताएका छन् ।
त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालय, सिँचाई मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायको धेरै रकम तिर्न बाँकी रहेको उनले बताए । उनले भने, 'सरकार निर्माण व्यवसायीको रकम तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।'
'निर्माण नसकिँदै उद्घाटन गर्न हतार गर्ने सरकारलाई काम सकिसकेपछि पनि त्यसमा लागेको रकम भने दिन चाहिँ किन हतारो हुँदैन ?' प्रश्न गर्दै उनले अगाडी थपे, 'सरकारले गौरवका आयोजनाहरूमा काम गर्न लगाएका व्यवसायीलाई समेत रकम दिएको छैन । विभिन्न बहाना बनाएर निर्माण व्यवसायीलाई देशमा काम नगर भन्न खोजिरहेको छ।'
बि.स. २०७६ सालदेखि देशका धेरै आयोजनामा काम गरेका निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाएका छैनन । २०७५ सालसम्म भुक्तानीका लागि कुनै पनि समस्या नभएको तर २०७६ सालदेखि सरकारले आयोजनालाई सङ्घीयता अनुसार विभाजन गरेपछि समस्या उब्जिएको उनको भनाई छ । उनले सङ्घीयताले उब्जाएको समस्याबारे यसरी कुरा राखे, 'तीन तहका सरकार बिचमा आयोजना बनाउन बाँडफाँड गरेपछि निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी पाउन छाडेको हो । स्थानीय सरकारले आयोजना बनाउने रकम नै नभईकन आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएका कारणले पनि ठेकदारले रकम नपाएको हो ।'
सार्वजनिक खरिद ऐन राम्रोसँग नपढेकाहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेका कारण पनि निर्माण व्यवसायीहरू समस्यामा पर्ने गरेको उनले आरोप लगाएका छन् । उनले भने, 'सरकारले २०७६ मा गरेको सार्वजनिक खरिद ऐनको नवौँ संशोधनले पनि थप समस्यामा पारेको छ।'
रुग्ण अवस्थामा रहेको आयोजनाहरूमा काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीको म्याद थपका क्रममा सरकारी निकायबाट सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थालाई बेवास्ता हुँदै आएको उनको आरोप छ । उनले भने, '२०७७ असार २९ गते सबै आयोजनाको म्याद ६ महिना थप गरिने भनेर मन्त्रीपरिषद् निर्णय त गर्‍यो तर, कतिपय आयोजनाहरू कोभिडका कारणले वा अन्य कारणले ११ महिनादेखि अघि बढ्न सकिरहेका थिएनन्। सरकारले ६ महिना समय थप्ने भनेर निर्णय त गर्‍यो तर समय थप्नलाई निर्देशन दिएको मितिदेखि थप गर्ने भन्नु पर्नेमा सम्झौता सकिएका मिति भन्ने लेखिँदा सबै निर्माण व्यवसायीहरू समस्यामा परेका हुन्।'
म्याद थपसहित रुग्ण ठेक्का २७ सय ७२ पुगेको उनले बताए । तिनीहरूले भुक्तानी पाउनु पर्ने रकम २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको उनले बताए । म्याद थपपछि करिब ५ सय देखि ६ सय वटा ठेक्काको निर्माण सम्पन्न भइसकेको सिंहको दाबी छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको फागुन १५ बाट एक वर्षका लागि रुग्ण ठेक्काको म्याद थपिएको थियो। सरकारले लकडाउनले गर्दा काम नभएको भन्दै ६ महिना समय थप गरिसकेको छ। त्यसमा कतिपय ठेक्काको सम्झौता सकिएको पाँच महिनापछि आएर सम्झौता म्याद थप भनेर निर्देशन गएका कारण ती आयोजनामा काम गरिरहेका व्यवसायीहरू अलपत्र परेका छन् ।
हाल काम भइरहेका सबै आयोजनामा गरेर करिब १५ लाखले रोजगारी पाएका थिए । अहिले फेरि कोरोनाले गर्दा प्रायः सबै बेरोजगार हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सबैभन्दा बढी ठेक्का सडक र पुलका छन् ।
ठेक्काको धरौटीबापत सरकारले राखेको ५ प्रतिशत रकम फिर्ता दिए पनि व्यवसायीहरूलाई सञ्चालन खर्च निस्कने उनको भनाइ रहेको छ । बैंकमा निर्माण क्षेत्रको मात्र ३ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण रहेको छ । ६५ अर्ब भन्दा बढी व्यवसायीहरूको रकम सरकारले दिन बाँकी रहेको सिंह बताउँछन् । 'यस्तो बेलामा निर्माण व्यवसायीहरूले कसरी आफ्नो दैनिक काम अघि बढाउने ?', उनी प्रश्न गर्छन् ।